Dowladda Soomaaliya oo digniin ka soo saartay Kooxaha Computerada udhaca | Wararka Jubbaland
Dowladda Soomaaliya oo digniin ka soo saartay Kooxaha Computerada udhaca
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolijiyada Xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin kasoo saartay Weerarada dhinaca Internetka ee lagu qaaday in ka badan 150 dal ay ku jiraan dowladaha dariska la ah Soomaaliya.
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolijiyada Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadka uga digtay qatarta Weerarada Internetka iyo Viruska lagu waxyeeleenayo Cumputerada ee Caalamka kusii baahaya.
Weerada dhinaca Internetka ee ku baahay dunida ayaa noqonaya kii ugu saameynta badnaa, waxaana Kooxaha burcada Intertnetka ee ka dambeeya weeraradan la sheegay in dadka weediisanayaan in ay bixiyaan lacago madax furasho ah.
Warka kasoo baxay Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolijiyada Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wadamada uu saameeyay Weerarkan ay ku jiraan qaar kamid ah Wadamada dariska la ah Soomaaliya sida dalka Kenya.
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolijiyada Xukuumadda Soomaaliya ayaa uga digtay shacabka Soomaaliyeed in ay digtoonaadaan qatarta ka imaan karta Weerarada dhinaca Internetka ee lagu waxyee;leenayo Cumputerada.